Cristiano Ronaldo Oo U Bushaareeyey Ragga BIDAARTA Leh – Latest Sports News
Cristiano Ronaldo Oo U Bushaareeyey Ragga BIDAARTA Leh
Xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa xarun lagu beero timaha a furtay caasimadda dalka Spain ee Madrid.
Ronaldo oo Madrid ka guuray xagaagii hore markii uu Juventus ku biiray ayaa shalay kusoo laabtay iyadoo ay wehelinayso gacalisadiisa Georgina Rodriguez, waxaana ay xadhiga ka jareen ganacsigooda cusub.
Xaruntan oo dadka bidaarta leh u beeraysa Timaha ayaa loo bixiyey Insparya, waxaana boqolkiiba konton iska leh Cristiano Ronaldo halka inta kalena ay yihiin saamiyo dad kale leeyihiin.
Ronaldo oo munaasibaddii xadhig ka jarista hadal ka jeediyey ayaa sheegay in bidaartu tahay dhibaato weyn oo haysata dadka ku nool qaaradda Yurub iyo dunidaba, ayna doonayaan inay caawiyaan.
“Bidaartu waa dhibaato weyn oo ka jirta Yurub iyo adduunkaba, waxaananu rabnaa inaanu ka caawino dadka inay horumariyaan kalsoonidooda oo aanay ka xishoonin inay inoo yimaaddaan.” Sidaas ayuu yidhi Cristiano Ronaldo.
“Qof kastaa wuu jecel yahay inuu daryeelo muuqaalkiisa, anigana ayaana tusaale cad ka ah, waana sababta markii Paulo (madaxa xaruntan) uu ii sheegay mashruucan aan degdeg ugu xaqiiqsaday inay tahay arrin gaar ah. Mashruucan wuxuu noqon doonaa mid guuleysta, sidoo kalena caawiya dadka reer Spain iyo dhaqaalaha Spain.” Ayuu raaciyey Cristiano Ronaldo.
Shirkadda Insparya ee tima-beeristu, waxay dalka Portugal ku leedahay 10 xarumood oo illaa hadda timo u beertay dad tiradoodu tahay 35,000 qof, waxaana qofka ay ku qaadanaysaa in timaha loo beero illaa lix saacadood iyadoo uu bixinayo lacag u dhaxaysa 4,000 illaa 7,000 Euro.